अमोक्सिसिलिन बनाम अग्मेन्टिन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
भारी खेल औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कल्याण समाचार समुदाय मनोरञ्जन समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कल्याण कम्पनी, समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> अमोक्सिसिलिन बनाम अग्मेन्टिन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
अमोक्सिसिलिन बनाम अग्मेन्टिन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
अमोक्सिसिलिन र अगमेन्टिन समान जीवाणु संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिक हो। अग्मेन्टिनमा अमोक्सिसिलिन समावेश हुन्छ अर्को क्षमता, क्लावुलानेट, उच्च क्षमताको लागि। दुबै एमोक्सिसिलिन र अग्मेन्टिन एन्टिबायोटिकको वर्गको एक हिस्सा हुन् जसलाई बीटा ल्याक्टम भनिन्छ। यी एन्टिबायोटिकहरू बच्चाहरू र वयस्कहरूलाई संक्रमणको फराकिलो उपचारको लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ। यद्यपि ती समान औषधीहरू हुन्, समीक्षा गर्न त्यहाँ केही भिन्नताहरू छन्।
Amoxicillin (Amoxicillin के हो?) Amoxil को सामान्य नाम हो। यो बच्चाहरूमा सामान्य जीवाणु संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो किनभने अमोक्सिसिलिनको उच्च दरको प्रभावकारिता र गम्भीर साइड इफेक्टको कम जोखिम छ। अमोक्सिसिलिनले कान, नाक, र घाँटी संक्रमण, कम श्वास नलिका संक्रमण, छाला संक्रमण, र मूत्र पथ संक्रमणहरूको उपचार गर्न सक्छ।
Amoxicillin जेनेरिक २ mg० मिलीग्राम वा mg०० मिलीग्राम मौखिक क्याप्सूलमा आउँदछ। अन्य सूत्रहरू उपलब्ध छन् जस्तै मौखिक निलम्बन, ट्याब्लेटहरू, र चेवाब्ले ट्याब्लेटहरू। यी अन्य योगनहरू विशेष गरी बच्चाहरू र निगलमा समस्या भएकाहरूको लागि उपयोगी हुन सक्छ। Amoxicillin सजिलो प्रशासन को लागी स्वाद गर्न सकिन्छ।
Amoxicillin मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
अमोक्सिसिलिन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
के अन्य इनहेलरहरु सिम्बिकोर्ट जस्तै छन्?
अग्मेन्टिन (अग्मेन्टिन भनेको के हो?) क्मोलेनेटसँग मिसाइएको अमोक्सिसिलिनको ब्रान्ड नाम हो। क्लावुलानेट एक बीटा-ल्याक्टमेज अवरोधकर्ता हो जसले ब्याक्टेरियाको एन्जाइमहरूलाई अमोक्सिसिलिन निष्क्रिय गर्नबाट रोक्दछ। अग्मेन्टिनले अमोक्सिसिलिनमा यस्तै संक्रमणहरूको उपचार गर्न सक्दछ र अन्य कडा स treat्क्रमणहरूको उपचार गर्न कठिन हुन सक्छ: साइनोसिटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, र अन्यमा छाला संक्रमण।
अग्मेन्टिन मौखिक निलम्बन, ट्याब्लेट, च्युवेबल ट्याब्लेट, वा विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा दिन सकिन्छ। शक्ति २ 250० मिलीग्राम / १२ 125 मिलीग्राम देखि 757575 मिलीग्राम / १२ 125 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन / क्लावुलनेटमा भिन्न हुन्छ। संक्रमण र व्यक्तिमा निर्भर गर्दै, डोजिंग पनि व्यापक रूपले विविध छ।
एन्टिबायोटिक संग प्रोबायोटिक्स लिने खमीर संक्रमण रोक्न
Augmentin मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Augmentin मूल्य सतर्कताको लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
अमोक्सिसिलिन बनाम अग्मेन्टिन साइड साइड बाइ साइड तुलना
Amoxicillin र Augmentin दुई समान एन्टिबायोटिक हो। यद्यपि ती दुबै समान एन्टिबायोटिक वर्गमा छन्, तिनीहरूसँग केहि भिन्नताहरू छन्। थप तुलनाको लागि तल हेर्नुहोस्।
कान, नाक, र घाँटी संक्रमण
एच। पाइलोरी संक्रमण
छाला र नरम ऊतक संक्रमण
तल्लो श्वास नलिका संक्रमण
जेनिटोरिनरी पथ संक्रमण
तीव्र ओटिटिस मिडिया
Amoxicillin जेनेरिक नाम हो
Amoxicillin / Clavulanate सामान्य नाम हो
मौखिक ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज
((प्रति १ tablets ट्याब्लेट)
66 6666 (प्रति २० ट्याब्लेट)
अमोक्सिसिलिन गर्भावस्था कोटि बीमा छ। यसले भ्रुण क्षतिको लागि जोखिम पैदा गर्दैन। गर्भावस्था वा स्तनपानको योजना बनाउने हो भने कदम चाल्न डाक्टरको परामर्श लिनुहोस्।
Augmentin गर्भावस्था कोटि बी मा छ। यसले भ्रुण क्षतिको लागि जोखिम पैदा गर्दैन। गर्भावस्था वा स्तनपानको योजना बनाउने हो भने कदम चाल्न डाक्टरको परामर्श लिनुहोस्।
अमोक्सिसिलिन र अगमेन्टिन समान बिटा-लैक्टम एन्टिबायोटिक हुन् जसले समान संक्रमणहरूको उपचार गर्न सक्दछन्। यद्यपि, Augmentin सामान्यतया amoxicillin को तुलनामा संक्रमणको उपचार गर्नका लागि सुरक्षित छ। यी कडा संक्रमण उपचार गर्न मिर्गौलामा संक्रमण वा गम्भीर छाला फोडा समावेश हुन सक्छ।
मसँग कस्तो रगत छ?
अमोक्सिसिलिन र अग्मेन्टिन पनि तिनीहरू कसरी बनाइन्छन्मा फरक छ। अग्मेन्टिन एक विस्तारित-रिलीज फारममा उपलब्ध छ जुन तपाईंको डाक्टरको निर्देशन अनुसार फरक तरीकाले गर्न सकिन्छ। दुबै औषधिहरूले समान साइड इफेक्ट र ड्रग अन्तरक्रिया साझा गर्दछ। अन्य एन्टिबायोटिक र रगत पातलो पार्ने औषधीहरू लिँदा तिनीहरू सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्छ।
उस्तै समानता र सम्भावित साइड इफेक्टका कारण, दुबै एन्टिबायोटिकहरू तपाईंको चिकित्सक द्वारा समीक्षा गर्नुपर्छ। संक्रमणमा निर्भर गर्दै, तपाइँको डाक्टरले एक भन्दा अर्कोमा एन्टिबायोटिक लेख्न सक्छ।
Lunesta vs Ambien: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
पुरुष जन्म नियन्त्रणको भविष्य: कसले गर्भनिरोधकहरू नियन्त्रण गर्नुपर्छ?
मूत्र औषधि स्क्रिनमा पीसीपी को लागी गलत सकारात्मक
कति meloxicam तपाइँ एक दिन मा लिन सक्नुहुन्छ
कति पटक तपाइँ xanax लिन सक्नुहुन्छ ।5
एलिग्रा डी लाई काम गर्न कती समय लाग्छ?
त्यहाँ premarin को लागी एक सामान्य औषधि छ